Accueil > Gazetin'ny nosy > Akon’ny fifidianana : Vaovao tapatapany, Ambohipo-Antananarivo
Akon’ny fifidianana : Vaovao tapatapany, Ambohipo-Antananarivo
Nifamadika ny lisi-pifidianana tao amin’ny birao fandatsaham-bato voalohany ka ny lista tokony ho any Ambohipotsy no lasa teny Ambohipo. Noho izany dia tara adiny iray mahery ny fifidianana tao amin’ity birao ity.
Ambatofinandrahana: Fanafihana maromaro no nitranga tany amin’ity distrika ity ny alarobia faha 7 novambra 2018, tamin’ny andron’ny fifidianana.
-Tao amin’ny fokontany Ambalahambana-Soanafindra tao ao amin’ny kaominina Amboropotsy dia nalain’ny dahalo an-keriny ny mpampianatra iray izay hamonjy ny birao fandatsaham-bato. Voalaza fa isan’ny mpikarakara ny birao ramatoa Jacqueline sy ny zanany iray izay mbola telo volana. Tsy afaka nifidy ny olona noho izany satria lasa nanara-dia nitady ity mpampianatra ity ny olona. Tokony tamin’ny 7 ora maraina no nitranga izany.
-Tao amin’ny kaominina Fenoarivo ao amin’ny tanànan’Ambalamahatsara sy Ampopotra dia nifanena tamin’ny mpanara-dia sy ny dahalo ka raikitra ny ady nanomboka tamin’ny 4 ora tolakandro, omaly alarobia faha 7 novambra 2018. Omby avy any Ambatomarina Manandriana no fototra ny ady izay ka olona iray maty ary fokonolona maro no naratra. Azon’ny dahalo ny sambo-belona ny fokonolona nanara-dia. Nalain’izy ireo ny finday rehetra tany amin’ny fokonolona ireo ka rehefa miantso ny fianakavian’ireo very omby ireo dia ny dahalo no mamaly azy ary milaza fa tongava ianareo hanampy ireto namanareo azo babo ireto.
– Tao amin’ny fokontany Ambatofinandrahana indray dia notafihin’ny dahalo ny tranon’ny mpiasan’ny kaominina antsoina hoe Mamy izay zandrin’ny CT Richard Razanabary ny talata faha 6 novambra alina. Lasan’ireo dahalo avokoa ny entana tao an-trano.
– Tao amin’ny fokontanin’i Tatamo dia nahazo fampitandremana an-taratasy tamin’ny dahalo fa hotafihiny ny alarobia faha 7 novambra 2018.
-Notafihin’ny dahalo ny mpiasan’ny FID ny talata hariva tokony ho tamin’ny 4 ora hariva. Lasan’izy ireo ny vola manapitrisany ary maty noho izany ilay mpamily ny fiara.
– Nisy depiote iray izay voalazan’ny olona fa nanao fizaram-bola tamin’ny mpifidy. Nisy nitory.
-Mahatratra antsasa-manila ny mpifidy voasoratra anarana no tsy nahazo ny kara-pifidianana. Maro no olona maty no mbola tafiditra tao anaty lisitra. Misy ny olona iray manana karatra telo, ary misy ny tsy voasoratra mihitsy na dia nanao fanisam-bahoaka aza tamin’ny fotoana nanaovana izany. Hatramin’ny fotoana farany dia mbola nisy hatrany ny olona nijery ny kara-pifidianany.
Maro koa no tranga isan-karazany any amin’ny faritra ka ho tanterinay eto ihany izany ao anatin’ny andro vitsivitsy. Ny zava-misy dia maro no tsy afaka nifidy ny olona tokony hifidy tamin’ity fifidianana ny faha 7 novambra 2018, izay fihodinana voalohany amin’izay ho filoham-pirenena indray.